किन UGC परिपूर्ण eCommerce सामग्री मार्केटिंग उपकरण हुन सक्छ - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक अप्रिल 15, 2021 अप्रिल 13, 2021 ज्याक रोजर B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
UGC सामग्री मार्केटिंगको एक लागत प्रभावी तरीका हो किनभने प्रयोगकर्ताहरूले सामग्री सिर्जना गर्छन्।
खोजी ईन्जिनले सामग्री मनपराउँदछ जुन यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि सान्दर्भिक र लाभदायक छ।
सबै ईकामर्स व्यवसाय अन्ततः मार्केटिंग रणनीतिहरू खोज्दैछन् जुन रूपान्तरण दर र बिक्री बढाउन सक्दछ।
प्रयोगकर्ताहरूले खुला सोशल मीडियालाई नयाँ उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा आफ्ना विचारहरू साझा गर्न प्लेटफर्मको रूपमा लाभ उठाउँछन्। त्यहाँ एक मौका छ कि उनीहरूले तपाईंको ईकामर्स ब्रान्डको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्।
प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री प्रदर्शन गरेर, तपाईं प्रोत्साहन र नियमित ग्राहकहरूलाई तपाईंको ग्राहक बन्न प्रेरित गर्नुहोस्।
तसर्थ, एक ईकामर्स ब्रान्डको रूपमा, तपाईले वास्तवमै प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्रीको शक्ति मार्केटिंग उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नु पर्छ तपाईको ब्रान्ड रूपान्तरण र बिक्रीलाई बढावा दिन। अहिले, तपाई किन सोचिरहनु भएको छ? यो ब्लगमा, हामी यसलाई विस्तारपूर्वक जवाफ दिनेछौं। पढिरहनुहोस्!
प्रयोगकर्ता-उत्पादित सामग्री - तपाईंको ई-कमर्स बिक्री बढाउन उत्तम मार्केटिंग उपकरण
लागत प्रभावी तर शक्तिशाली
UGC सामग्री मार्केटिंगको एक लागत प्रभावी तरीका हो किनभने प्रयोगकर्ताहरूले सामग्री सिर्जना गर्छन्। अतिरिक्त पैसा बचत गर्नुहोस् जुन तपाईं सोशल मिडिया वा बिभिन्न अन्य विज्ञापन साधनहरूमा प्रख्यात प्रभावकारको साथ सहकार्य गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री सुपर शक्तिशाली छ किनकि यो तपाईंको ब्रान्डको पूजा गर्ने प्रयोगकर्ताहरू द्वारा सिर्जना गरिएको हो। छवि, भिडियो, gifs, गुगल वा फेसबुक समीक्षाको रूपमा हुनुहोस्; यो सामग्री तपाइँको ब्रान्डको लागि लाभदायक हुन सक्छ; कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई तपाईंको ब्रान्डको प्रकाशित सामग्री भन्दा बढि विश्वास गर्न थाल्छ।
बढेको SEO रैंकिंग
पहिलो चरण जुन उत्पादनको लागि खोजी गर्ने क्रममा व्यक्ति यसलाई अनलाइन खोजी गर्नका लागि गर्छन्। तिनीहरू तत्काल खोजी ईन्जिनमा जान्छन् र गुगल समीक्षाहरू, भिडियो प्रशंसापत्रहरू इत्यादि खोज्छन्। आफ्ना विश्वासलाई ब्रान्डमा राख्न उनीहरू आफूले चाहेको सबै कुरा खोजिरहेका हुन्छन्।
खोजी ईन्जिनले सामग्री मनपराउँदछ जुन यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि सान्दर्भिक र लाभदायक छ। अधिक प्रयोगकर्ताहरु तपाइँको ब्रान्डको साथ संलग्न छ र तपाइँको वेबसाइट मा यातायात वृद्धि, अधिक तपाइँ स्थानीय एसईओ मा रैंक हुनेछ।
यसबाहेक, यूजीसीले ती कुञ्जी शव्दहरू समावेश गर्दछ जुन व्यक्तिले प्राय: खोजी गर्दछन्, र त्यसैले यसले तपाईंको खोजीलाई सुधार गर्दछ।
एक ठोस सामाजिक प्रमाण निर्माण गर्नुहोस्
यो विचार गर्नुहोस् - तपाईं आफ्नो इलाकाको नजिक सैलुन सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईं गुगलको क्षेत्र 'सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र सैलुन'। हामी मध्ये धेरैले त्यसो गर्छौं, हैन?
तपाइँ तपाइँको नजिक सबै भन्दा राम्रो सलुनहरूको सूची देख्नुहुन्छ र तुरून्त समीक्षा मार्फत जानुहोस्। तपाईं सैलूनलाई उत्तम समीक्षाको साथ सर्टलिस्ट गर्नुहुनेछ र तिनीहरूको सेवाहरू लिनुहुनेछ जब तपाईं तिनीहरूको सेवाहरूको बारेमा अन्य ग्राहकहरूको सकारात्मक समीक्षा पढ्नुहुन्छ।
कुनै पूनरावलोकन बिना सलोनको आँखा-आकर्षक तस्बिरहरू र कल्पना विवरणहरू उनीहरूको सेवाहरू लिन तपाईं पर्याप्त आश्वस्त हुने थिएन।
यो सामाजिक प्रमाण सिर्जना गर्ने शक्ति हो। यो गरेर, तपाईं आफ्नो अवस्थित साथै सम्भावित ग्राहकहरूको विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
बढेको रूपान्तरण र बिक्री
सबै ईकामर्स व्यवसाय अन्ततः मार्केटिंग रणनीतिहरू खोज्दैछन् जुन रूपान्तरण दर र बिक्री बढाउन सक्दछ। तपाईं सिर्जना गर्न ट्यागबक्स वाणिज्य जस्ता प्लेटफर्महरू उठाउन सक्नुहुन्छ शपपेबल यूजीसी ग्यालरीहरु
प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री प्रदर्शन गरेर, तपाईं प्रोत्साहन र नियमित ग्राहकहरूलाई तपाईंको ग्राहक बन्न प्रेरित गर्नुहोस्। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, सबै खरीददारहरू हेर्नका लागि ब्राण्ड विश्वसनीयता र सकरात्मक समीक्षा हुन्।
ती दिनहरू गयो जब ग्राहकहरू ब्रान्डको सामग्रीमा भरोसा राख्छन्।
सुधारिएको शपिंग अनुभव
ती दिनहरू गयो जब ग्राहकहरू ब्रान्डको सामग्रीमा भरोसा राख्छन्। सम्झनको लागि कुञ्जी तपाईंको पसललाई हल्कासित लिनु हुँदैन। तिनीहरू स्मार्ट छन् र सँधै अन्य शपर्सले अनुभव गरेको खोजी गर्दछन्।
जब तिनीहरूले अन्य उत्पादनहरू तपाईंको उत्पादहरू वा सेवाहरू प्रयोग गरेर पोस्ट गरेको सामग्री देख्छन्, तिनीहरू आफैंमा पनि उत्पादनहरू कल्पना गर्दछन् र उत्पादनको गुणस्तरसँग सन्तुष्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले अझ राम्रो शपिंग अनुभवको परिणाम दिन्छ।
UGC- सामग्री मार्केटिंगको भविष्य
ग्राहकहरु राजा हुन्, र ती बिना तपाईको व्यवसाय फल्छ र बाँच्न सक्दैन। तपाईको ब्यापार सफल हुन्छ एकचोटि तपाईले आफ्ना ग्राहकहरूसँग व्यक्तिगत स्तरमा सम्बन्ध बनाउनु भयो।
सबैजना चित्रित हुन मन पराउँछन्। तपाईका ग्राहकहरुलाई देखाउनुहोस् कि तपाईले तिनीहरुको सुझाव लाई कदर गर्नुहुन्छ र तिनीहरुलाई समीक्षा दिन प्रोत्साहित गर्नुहोस्। यदि ग्राहकले तपाईंको ब्रान्डलाई पोष्टमा ट्याग गर्दछ भने, यसलाई तपाईंको फिडमा पोस्ट गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई ट्याग गर्नुहोस्।
यसले तिनीहरूलाई र तपाईंको अन्य ग्राहकहरूलाई तपाईंको ब्रान्डमा बढि संलग्न गराउन प्रेरणा दिन्छ।
यसका अतिरिक्त, प्रयोगकर्ता-उत्पादित सामग्री तपाईंको ईकामर्स ब्रान्डको दृश्यता प्रदान गर्दछ जुन अन्य भुक्तान गरिएको मार्केटिंग अभियानहरूले गर्न सक्दैन।
प्रयोगकर्ता-उत्पन्न सामग्री सामग्री मार्केटिंगको सब भन्दा शक्तिशाली र नतीजा संचालित रूप हो, जो ईकॉमर्स ब्रान्डको लागि खजाना हुन सक्छ यदि राम्रोसँग लिभेरिएज गरियो भने।
यूजीसी प्रयोग गर्नाले तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूसँग तपाईंको संलग्नता सुधार गर्न सक्दछ, तपाईंको ब्रान्ड मान र दृश्यता बढाउन, सामाजिक प्रमाण निर्माण गर्न, तपाईंको अवस्थित र सम्भावित ग्राहकहरूमा विश्वास जगाउन, बिस्तारै तपाईंको ब्रान्ड रूपान्तरण दर बढाउन र तपाईंको बिक्री बढाउन सक्दछ।
जे होस्, सबै उल्लेखित लाभहरूको मजा लिन, तपाईंलाई अत्यधिक प्रतिक्रियाशील र प्रयोगकर्ता-मैत्री सामाजिक मिडिया एग्रीगेटर चाहिन्छ जसले तपाईंको वेबसाइटमा तपाईंको यूजीसीलाई प्रभावकारी रूपमा स collect्कलन, क्युरेट, र प्रदर्शन गर्न सक्दछ!
सांप्रदायिक समाचार ब्रान्ड मान बढाउनुहोस् सामाजिक ईकामर्स UGC सामग्री
म ज्याक रोजर हुँ, र म एक प्राविधिक लेखक हुँ। म अर्थपूर्ण सामग्रीको अनुसन्धान गर्ने र शब्दमा राख्ने अभिलाषा राख्छु, जस्तै नवीनता, टेक्नोलोजी, सोशल मिडिया, र डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंडहरू।